एफडीए काउन्टर मा Sklice अनुमोदन - औषधि जानकारी, समाचार | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार स्वास्थ्य चेकआउट औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार भारी खेल घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी, समाचार >> एफडीएले हेड जुँलो लोशनको लागि Rx-to-OTC स्विचलाई अनुमोदन गर्‍यो
एफडीएले हेड जुँलो लोशनको लागि Rx-to-OTC स्विचलाई अनुमोदन गर्‍यो
गैर-महामारी बितेका वर्षहरूमा, हरेक अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूको प्रिस्कूल वा प्राथमिक स्कूलबाट विशेष फोन कल वा नोट प्राप्त गर्न डराउँछन्: तपाईंको बच्चाको टाउकोको जुँगा छ र यो निर्मूल नभएसम्म स्कूलमा फर्कन सक्दैन। अब आमाबाबुसँग उनीहरूको बच्चाहरूको उपचार र समस्याबाट मुक्त हुनका लागि सजिलो विकल्प छ टाउकोको जुँगा , त्यसोभए उनीहरूका बच्चाहरू कक्षामा फर्केर जान सक्दछन्।
संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले पुरानो जुत्ताको उपचार गर्न ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) प्रयोगको लागि पहिलेको पर्चेको मात्र लोशनलाई अनुमोदन गरेको छ। सन्दर्भ (ivermectin) खोपडी र कपालमा लागू गरिएको छ जुम्रा मार्नको लागि १० मिनेटसम्म पानीले राम्ररी धोइनु अघि।
रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार (सीडीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकामा and देखि ११ वर्ष उमेरका बच्चाहरूमा प्रत्येक वर्ष टाउको जुँगाका Six देखि १२ करोड केसहरू देखा पर्दछ।
यो खबर ती सबै परजीवी कीराहरू र निट भनेर चिनिन्छ, अझ साना अण्डा, हटाउन को लागी एक प्रभावी तरीका खोज्न ती सबै निराश आमा बुबा को लागी एक सान्त्वना हुनेछ।
कसरी परिवर्तन गरियो
०.%% इभेरमेक्टिन लोशनलाई मूल रूपमा एफडीएले २०१२ मा in महिना र सो भन्दा माथिका व्यक्तिको लागि प्रयोगका लागि अनुमोदन गरेको थियो। यो आर्बर फार्मास्यूटिकल्स, LLC द्वारा निर्मित हो। यस निर्णय हुनु अघि स्लाइस केवल एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ उपलब्ध थियो।
एफडीएले आफ्नो आरएक्स-टू-ओटीसी स्विच प्रक्रियाको प्रयोग गर्न यो एकल प्रयोग लोशन औषधि पसलमा उपलब्ध बनाउँनका लागि बिरामीहरूलाई बाल चिकित्सकको पहिलो भ्रमण नगरीएको थियो।
कति समय तपाइँ योजना बी को उपयोग को लागी पर्खन सक्नुहुन्छ
अनुमोदनले टाउको जुँगा भएका हजारौं व्यक्तिहरूको लागि अर्को प्रभावशाली सामयिक उपचारको पहुँच विस्तार गर्दछ, भन्छ थेरेसा माइकल, एमडी , एफडीएको केन्द्र मा औषधि मूल्यांकन र अनुसन्धान केन्द्र मा एक बयान मा Nonprescription ड्रग्स को कार्यालय को कार्यवाहक निर्देशक।
Rx-to-OTC प्रक्रिया औषधिको उपभोक्ता पहुँच बढाउनको लागि डिजाइन गरिएको थियो जुन प्राय: पर्ची द्वारा मात्र उपलब्ध हुन्छन्। एफडीएका अनुसार, यी स्विचहरू सामान्यतया औषधि निर्माताहरूले सुरु गर्छन्। उनीहरूले प्रदर्शन गर्नै पर्छ कि पर्ची बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रस्ताव गरेमा औषधि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
(०.%% सूत्रमा इभेरमेक्टिनको अर्को फारामले प्रिस्क्रिप्सन आवश्यक पर्दछ। यो संस्करण, जुन रोजासियाको सामयिक उपचारमा प्रयोग हुन्छ, ब्रान्डको नाममा बेचिन्छ। सौंलान्ट्रा , गल्डेर्मा प्रयोगशालाबाट।)
अन्य टाउकोको जूँको उपचार
स्क्लिसको साथसाथै, अभिभावकहरूले पनि यी प्रयास गर्न सक्दछन् उपचार विकल्पहरू ।
तिनीहरू एक ओटीसी उत्पादन शैम्पू छनौट गर्न सक्छन् कि समावेश गर्दछ permethrin , एक कीटनाशक जुन जुँवाको लागि विषाक्त छ, वा pyrethrin को रूपमा चिनिन्छ एक यौगिक। विकल्पहरूले समावेश गर्दछ:
केहि छैन : निक्स उत्पादनहरू, जसले permethrin समावेश गर्दछ, एक शैम्पू र क्रीम को रूप को लागी कपाल को रूप मा उपलब्ध छन्, साथै संयोजन उत्पादन, निक्स अल्ट्रा सुपर जूँ उपचार ।
छुट : तपाईं संग जान सक्नुहुन्छ छुट्याउने किलिंग शैम्पू , वा छनौट म्याक्स जूँ हटाउने किट वा छनौट गर्नुहोस् मुक्त म्याक्स पूरा किट । रिडमा सक्रिय सामग्रीहरू पाइपरोनिल बुटोअक्साइड र पाइराथ्रिनहरू हुन्।
वा तिनीहरू एक पर्ची-शक्ति उपचार संग जान रुचाउन सक्छन्। तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकले पेडिकुलिसाइड लोशन वा पेडिकुलिसाइड शैम्पू बीच चयन गर्न सक्दछ, दुबै जुम्रालाई मार्नको लागि हो। पेडीक्युलसिड युक्त प्रिस्क्रिप्शन लोशनले समावेश गर्दछ:
नाट्रोबा : नाट्रोबा (स्पिनोसाड) टाउकोको जुँलाको लागि सामयिक उपचार हो जुन थियो २०११ मा एफडीए द्वारा अनुमोदित । यो सामान्यतया ०.० प्रतिशत शक्ति समाधानको १२० एमएल बोतलमा आउँछ। तपाईंले यसलाई प्रभावित व्यक्तिको सुख्खा कपाल र टाउकोमा लागू गर्नुहुन्छ, यसलाई दस मिनेट बस्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई तातो पानीले कुल्ला।
ओभिड : ओभिड ( म्यालेथियन ) अर्को पर्चेको लोशन हो जुन टाउकोको जुँवा र उनीहरूको अण्डालाई पनि लक्षित गर्दछ।
Lindane : Lindane शैम्पू जूँ उपचार गर्न को लागी एक प्रिस्क्रिप्शन हो।
कुनै किसिमको उपचार उत्पादन प्रयोग गर्नु अघि, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा फार्मासिष्टको साथ जाँच गर्नुहोस्, किनकि केहि उपचारहरूमा उमेर प्रतिबन्धहरू हुन सक्छ, वा तपाईंले प्रयोग गर्दा वा लागू गर्दा तपाईंले केही सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
एकलकेयर बचत अब Hy-Vee मा उपलब्ध छ
के तपाईको एलर्जी औषधिले तपाईलाई वजन बढाइरहेको छ?
सबैभन्दा राम्रो तरीका खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
तपाइँ जन्म नियन्त्रण शट मा तौल किन प्राप्त गर्नुहुन्छ?
के तपाइँ अगस्ट मा फ्लू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
म बीमा बिना चिकित्सा हेरचाह कहाँ पाउन सक्छु?
मुटुको दौड र गर्भावस्थामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ